बर्थस्टोन भनेको के हो? परम्परागत र आधुनिक। नयाँ अपडेट २०२१
हामी तपाईंलाई सूचित गर्दछौं कि जन्मको बारेमा सबै वैज्ञानिक छैन। यसकारण हामी ज्यामोलोजिकल विज्ञानको क्षेत्र छोड्छौं।
धेरै मानिस यस विषयमा चासो राख्छन्, त्यसैले यहाँ जन्मदण्डको सबै भन्दा सही विवरण दिनको लागि हाम्रो अनुसन्धानको परिणाम हो।
बर्थस्टोन एउटा रत्न हो जसले व्यक्तिको जन्म महिना प्रतिनिधित्व गर्दछ।
प्रथम शताब्दीका यहूदी इतिहासकार जोसेफसले हारूनको छातीमा बाह्रवटा ढु .्गाका बीचमा सम्बन्ध रहेको विश्वास गरे। प्रस्थानको पुस्तकमा वर्णन गरिए अनुसार, इस्राएलका कुलहरूलाई संकेत गर्दै। वर्षको बाह्र महिना, र साथै बाह्र चिन्ह राशिफल.
ब्रेस्टप्लेटको सम्बन्धमा प्रस्थानमा भएको अनुच्छेदको अनुवाद र व्याख्या व्यापक रूपमा भिन्न छन्। जोसेफसले आफैं बाह्रवटा ढु stones्गाका लागि दुई फरक सूची दिन्छ। जर्ज कुन्जले तर्क गरे कि जोसेफसले दोस्रो मन्दिरको कवच देखे, प्रस्थानमा वर्णन गरिएको थिएन। सेन्ट जेरोमले जोसेफसलाई औंल्याउँदै भने कि नयाँ यरूशलेमको फाउन्डेसन स्टोन्स मसीहीहरूका लागि उपयुक्त हुन्छ।
आठौं र नवौं शताब्दीमा प्रेरितहरूले कुनै खास ढु stone्गालाई जोड्ने धार्मिक ग्रन्थहरू लेखिएका थिए, ताकि “तिनीहरूका नाम फाउंडेशन स्टोन्स र त्यसका सद्गुणहरूमा लिप्न सकून्।” अभ्यास बाह्रवटा ढु stones्गा राख्ने र एक महिनामा लगाउने भयो।
एकल जन्मस्टोन लगाउने चलन केवल केही शताब्दी पुरानो हो, यद्यपि आधुनिक अधिकारीहरू मितिहरूमा फरक छन्। कुन्जले यो प्रथा अठारहौं शताब्दी पोल्याण्डमा राख्छ, जबकि अमेरिकाको जेमोलजिकल इन्स्टिच्यूटले यसलाई १ in1560० को दशकमा जर्मनीमा सुरु गर्दछ।
आधुनिक जन्मसूचीहरूका सूचीहरू ब्रेस्टप्लेट वा क्रिश्चियन धर्मका फाउंडेशन स्टोन्ससँग कम सम्बन्धित छ। स्वाद, चलन र भ्रामक अनुवादहरूले तिनीहरूलाई आफ्नो ऐतिहासिक उत्पत्तिबाट टाढा राखेका छन, एक लेखकले १ 1912 १२ को कन्सस सूचीलाई "निराधार बिक्री बिक्रीको एक टुक्रा बाहेक केही" भनेका थिए।
पुरानो परम्परागत जन्मदरहरू समाज आधारित जन्मस्थानहरू हुन्। तल तालिकामा धेरै पत्थरहरू छन् जुन लोकप्रिय छनौटहरू हुन्छन्, प्राय: पोलिश परम्परा देखाउँछन्।
त्यहाँ कविताहरू छन् जुन ग्रेगोरियन पात्रोको प्रत्येक महिनाको बर्थस्टोनसँग मिल्दछ। यी अंग्रेजी भाषी समाजहरूको परम्परागत ढु traditional्गा हुन्। टिफनी एण्ड कम्पनीले पहिलो पटक यी कविताहरू १ 1870० मा पर्चामा प्रकाशित गरे।
1912 मा, जन्मदण्डको मानक मान्ने प्रयासमा, ज्वैलर्सको अमेरिकन नेशनल एसोसिएशन, अब अब ज्वेलर्स अमेरिका भनिन्छ, कन्सोन्समा भेटियो र आधिकारिक रूपमा एउटा सूची स्वीकृत भयो। अमेरिकाको आभूषण उद्योग काउन्टी जुन 1952 मा सूची को लागि Alexandrite जोड गरेर अद्यतन, सिट्रीन नोभेम्बर र गुलाबीको लागि टूमलाइन अक्टुबर को लागी।
उनीहरूले डिसेम्बरको ल्यापिस पनि प्रतिस्थापन गरे जिक्रोन र मार्चको लागि प्राथमिक / वैकल्पिक रत्नहरू स्विच गरियो। अमेरिकन जेन ट्रेड एसोसिएसन पनि थपियो tanzanite 2002 मा एक डिसेम्बर जन्मदिन को रूप मा। 2016 मा, अमेरिकी मिथ ट्रेड एसोसिएसन र अमेरिकाको ज्वेलर्सले थपे spinel अगस्तको लागि अतिरिक्त बर्थस्टोनको रूपमा।
बेलायतको नेशनल एसोसिएशन अफ गोल्डस्मिथ्सले पनि १ birth .1937 मा आफ्नै मानकीकृत जन्मस्टोनहरूको सूची सिर्जना गर्‍यो।
पूर्वी संस्कृतिहरूले जन्मसँग मिल्दोजुल्दो समान रेंजहरू पहिचान गर्दछन्, यद्यपि एक रत्नलाई जन्म महिनासँग सम्बन्धित गर्नुको सट्टा, रत्नस्थलहरू आकाशीय पिण्डहरूसँग सम्बन्धित हुन्छन्, र ज्योतिषशास्त्र यस रत्नको निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन खास व्यक्तिसँग नजिकको सम्बन्ध हो र लाभदायक हुन्छ।
उदाहरणका लागि, हिन्दू धर्ममा नवग्रहमा नौ रत्नहरू छन्। ग्रहहरू, सूर्य, र चन्द्रमा सहित आकाशीय शक्तिहरू, जुन संस्कृतमा नवरत्न (नौ रत्नहरू) भनेर चिनिन्छ।
जन्ममा, एक ज्योतिषीय चार्ट पनि गणना गरिन्छ। केहि ढु stones्गा शरीरमा लगाउन सिफारिस गरिन्छ सम्भावित समस्याहरू रोक्न। सही शक्ति र जन्मको समयमा यी शक्तिको स्थानको आधारमा आकाश।
संस्कृतहरु द्वारा जन्मस्थान
महिना १th औं - २० औं शताब्दी यूएस (1912) यूएस (2016) बेलायत (2013)
जनवरी गारनेट गारनेट गारनेट गारनेट
फेब्रुअरी नीलम, हाईसिन्थ,
मोती नीलम नीलम नीलम
मार्च रगत, jasper रगत,
अप्रिल हीरा, नीलम हीरा हीरा हीरा, रक क्रिस्टल
जुन बिरालोको आँखा,
फिरोजा, agate मोती, moonstone मोती, moonstone,
alexandrite मोती, moonstone
जुलाई फिरोजा, गोमेद ruby ruby रूबी, carnelian
अगस्ट sardonyx, carnelian, चन्द्रन, पुखराज sardonyx, Peridot Peridot, spinel Peridot, sardonyx
सेप्टेम्बर chrysolite नीलम नीलम नीलम, lapis lazuli
अक्टोबर आपल, Aquamarine आपल, टूमलाइन आपल, टूमलाइन आपल
नोभेम्बर पुखराज, मोती पुखराज पुखराज, सिट्रीन पुखराज, सिट्रीन
डिसेम्बर Bloodstone, माणिक फिरोजा, lapis lazuli फिरोजा, जिक्रोन,
tanzanite tanzanite, फिरोजा
Sigilite ११..11.45 ct
गुलाबी ब्रेसीएटेड मूकैटा 9.01 सीटी
कालो तारा मूनस्टोन .9.54..XNUMX२ सीटी
आपल 2.83 CT
फ्लोराइट 2.64 सीटी
कोरल २.११ सीटी